Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Garoomada diyaaradaha ee Bangkok si loogu adeego Isbitaalada COVID-19
Caafimaadka Warka • Wararka Jaban ee Japan • News • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
COVID-19 cosbitaalada goobta
Wasiirka gaadiidka ee Thailand Saksayam Chidchob ayaa sheegay dhamaadka usbuucan in qabanqaabada 7,000 oo sariirood kale la sameeyay sababo la xiriira xaalada coronavirus ee hada jirta oo ah qaabka isbitaalada COVID-19, maadaama bukaan aad u tiro badan ay sugayaan daaweyn.
COVID-19 cosbitaalada goobta ayaa laga dhisi doonaa meelaha aan loo isticmaalin 2 garoon diyaaradeed.
Madaarka Suvarnabhumi kaligiis wuxuu awoodi doonaa inuu qaabilo in kabadan 3 jeer bukaanno badan sida Isbitaalka Bussarakham.
Japan ayaa ku dhaqaaqday iyada oo 1.5 milyan oo qiyaasta tallaalka AstraZeneca ah si ay uga caawiso Thailand dagaalka ay kula jirto COVID-19.
Meelaha aan la isticmaalin ee Suvarnabhumi iyo Don Mueang garoomada diyaaradaha labadaba waxaa loo isticmaali doonaa in lagu dhiso isbitaalada goobta.
Saksayam wuxuu sheegay in dowlada ay dhameystirtay heshiis kireysi oo kumeel gaar ah Garoomada diyaaradaha ee Thailand (AOT), sababtoo ah heshiiska kirada ee Isbitaalka Bussarakham ee Impact Muang Thong Thani ee gobolka Nonthaburi wuxuu dhacayaa bisha Ogosto.
Sida laga soo xigtay Mr. Saksayam, isbitaalka ku yaal garoonka diyaaradaha ee Suvarnabhumi wuxuu awoodi doonaa inuu qaabilo in ka badan 3 jeer tirada bukaanada ku jira Isbitaalka Bussarakham. Intaas waxaa sii dheer, garoonka diyaaradaha Don Mueang wuxuu ku jiraa diyaarinta dhisme bakhaar oo loogu talagalay in laga dhiso isbitaal duurka ku yaal, kaas oo ka koobnaan doona qiyaastii 2,000 oo sariirood oo loogu talagalay bukaannada oo leh astaamo khafiif ah.
Japan ayaa talaabo u qaaday si ay u caawiso
Dowladda Thai ayaa qabatay xaflad rasmi ah 12-kii Luulyo si ay u hesho 1.5 milyan qaadasho oo ah tallaalka AstraZeneca COVID-19 oo ay ku deeqday dowladda Japan si gacan looga geysto la dagaallanka faafitaanka COVID-19.